Iyo Huawei Watch 2 inosvika kuve pazvitsitsinho zveApple Watch | Ndinobva mac
Zvekare zvakare isu tinofanirwa kutaura nezve huru Apple Tarisa, iyo Cupertino wachi iyo kunyangwe paine painogumira inoramba ichibudirira. Panguva ino, izvo zvatinoda kukuudza zvinoitirwa mukwikwidzi mutsva uyo aratidza musoro wake paMWC 2017. Ndiyo Huawei Watch 2, wachi itsva yeHuawei iyo inotsvaga kukwikwidza iyo Apple Watch mumitambo.
Huawei aunza iyo itsva Huawei Watch 2 paMobile World Congress, mudziyo wakachinja zvakanyanya mukati mayo asi wanga uchitariswa zvakanyanya pasirese yemitambo nezvose izvi zvinosanganisira uye kumira semumwe wevakwikwidzi vakuru veApple Watch.
Usati wataura zvishoma nezveHuawei Tarisa 2, isu tinoda kuyeuka kuti Apple haina kumira kushanduka sekusvika kune yayo Apple Watch uye ndiko kuti mune yechipiri vhezheni yeApple Watch, iyo Apple Watch Series 2 yaive yakagadzirirwa, kunyanya, ine GPS chip iyo yakaita kuti iwedzere Anochinjika kupfuura epakutanga, anogona zvakare kushandura iyo watchOS system, kuwana mumabasa kunyanya kune vatambi.
Uku ndiko kushanduka kwakaita kuti Apple yakabatana neNike pachayo kuvhura yakasarudzika modhi inonzi Apple Watch Nike +, wachi yakauya nemabhande akasarudzika pamwe nechero software yaiita kuti ive yakasiyana.
Kunyangwe achiziva zvese izvi, iyo Huawei mhando yakada kutarisana neApple neyechipiri vhezheni yayo, iyo wachi yeHuawei 2. Iyi smartwatch yakanangiswa kuongorora uye kuchengetedza kwezuva nezuva chiitiko chemuviri Username. Kana chiri chimiro cheiyo wachi, Huawei anoenderera mberi nekubheja padenderedzwa rinotenderera ichienzaniswa nechairi rectangular yeApple Watch kunyangwe iri diki diki pane iyo yekutanga Huawei Kuona.
Chimwe chezvinhu chatinofanira kutaura pamusoro peiyo nyowani Huawei Tarisa 2 ndechekuti yakaverengerwa, semuApple Watch Series 2, yakaderera nzira yekushandisa iyo inoita kuti mudziyo usvike kuve nekuzvimiririra kwechimwe chinhu uye hapana kana pasi pemazuva makumi maviri nemashanu, kunyangwe ichingoratidza iyo nguva uye kuverenga matanho.
Nezve kuramba mvura uye guruva, iyo Huawei Watch 2 ine zvimwe chete IP68 certification kupfuura iyo Apple Watch Series 2 kuti ugone kuinyudza kunyangwe mumadziva ekushambira. Mutengo weHuawei Watch 2 unosiyana zvichienderana nekuti tirikuda kubatanidza 4G here kana kuti kwete. Iyo modhi ne4G yekubatanidza iri mutengo pa € ​​379Zvisinei, mutengo we modhi isina 4G iri € 329. Pasina kupokana ndeimwezve mukwikwidzi weApple Watch Series 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Huawei Watch 2 inosvika kuve pazvitsitsinho zveApple Watch